Tirada Dadka Qaatay Kaadhka Codbixinta Somaliland oo la Shaaciyey
Guddida doorashooyinka Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqay tirada dadka qaatay kaadhka cod-bixinta doorashooyinka soo socda, iyagoo sheegay inay qaateen 704,089 oo cod bixiye, kuwaasi oo ka codayn doona 1642 goobood oo ku yaalla 21 degmo doorasho.
Iyadoo hore ay kaadhadhka cod bixinta u qaateen dad gaadhaya 873,331 oo qof ayay waraysi gaar ah oo ay VOA siiyeen guddiga doorashada ayay ku sheegeen in tirada aan qaadanin kaadhadhkooda si ay ugu codeeyeen ay u soo doonan waayeen sababo ay kamid tahay abaartii dhawaan ku dhufatay qaar ka mid ah deegaanada Somaliland.
Guddiga doorashoyinku ayaa waxa ay xogtan ku wareejiyeen saddexda xisbi siyaasadeed iyo wasiirka arrimaha gudaha.
Somaliland ayaa lagu wadaa inay doorashada madaxtooyadu ay ka dhacdo 13-ka bisha November ee sanadkan, iyadoo ay ku tartami doonaan sadex musharax oo kala matali doona xisbiyada Kulmiye, Wadani iyo Ucid, waxaana la filayaa in dhawaan ololihii doorashadu uu ka bilaabmo guud ahaan Somaliland.
Weriyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrintan ka wareystay zfhayeenka guddida doorashada Siciid Cali Muuse.
Dhageyso Warbixin ka Hadleysa Doorashada Somaliland